कसरी एकाएक चर्चामा आइन् अस्मिता , को हुन, कस्तो छ उनको जीवनशैली ? « गोर्खा आवाज
पछिल्लो समयमा अत्यन्तै दर्शक स्रोतले मन पराइदिनु भएको पिपलु वर नामक गीत अहिले युटुब, टिकट्क लगायत अन्य सामाजिक संजाल लगाएत अन्य मिडियामा पनि निकै चर्चा कमाउदै गएको छ । उक्त गीतमा नेपाली संगीतीक क्षेत्रमा चर्चामा रहनु भएका पल शाह र अस्मिता पन्तले गरेकी छन , अत्यन्तै राम्रो अभिनय संगै गीत पनि उस्तै राम्रो भएकोले गर्दै यो गीत अहिले आशा गरे भन्दा पनि बढी सफलता हासिल गर्दै आएको छ ।
पहिलो पटक म्युजिक भिडियो खेल्ने अवसर पाइकी अस्मिता अहिले उनी नेपाली सङितिक क्षेत्रको चर्चामा छिन ।
* को हुन अस्मिता पन्त ?
ग्रामिण परिवेशमा हुर्केकी अस्मिता निकै चन्चले स्वभाव अनि निकै दयालु स्वभावकि छन । बाराको सिमारामा बस्दै आएकि अस्मिता अहिले ऊनी आफ्नो परिवार संगै ललितपुर मा बस्दै आएकि छन् । सानै उमेर देखी संगीत क्षेत्रलाई मन पराउने अस्मिता अहिले उनि संगीतीक क्षेत्रमा नै प्रवेश गरेकी छन् । बि. स २०६९ सालमा श्री नेपाल रास्टिय माध्यमिक बिधालयबाट उनले S L C पास गरीकी थिइन् भने प्लस टु (+2) मा बाराकै सिमारा बाट पास गरेकी हुन् । अहिले उनी T.U अन्तर्गत BBS अध्यानरत छिन ।
* कसरी एकाएक चर्चामा आइन् अस्मिता ??
केहि हप्ता अघि उनको अभिनयमा पिपलु वर नामक गीत सार्वजनिक भएको थियो , उक्त गीत दुई साता नबित्दै २ मिलियन भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्दै उक्त गीतमा अभिनय अस्मिता पनतकाे पनि चर्चा बढ्दै गएको छ। उनि टिकटक मा पनि उतिकै चर्चा कमाउने गरेकी छिन् ।
* कस्तो छ उनको भविष्य(विचार)?
अत्यन्तै राम्रै शिष्टाचार व्यवहार साथै उनको त्यो लोभलाग्दो अभिनयले गर्दा उनलाई म्युजिक भिडियोको पनि उत्तिकै अफर आएको बताउँछिन् ।उनको यस क्षेत्रमा उत्तिकै रुचि भएकोले गर्दा उनले यस क्षेत्रमा निकै सफलता हासिल गर्ने छिन् भन्ने कुरा स्वत आकलन गर्न सकिन्छ । यस्तै तरिकाले जाने हो भने सम्पूर्ण fans तथा साथीहरूको त्यो माया र साथ लाई सहि तरिकाले लिने हो भने उनले यस क्षेत्रमा निकै सफलता हासिल गर्नेछन्।
*अहिले के को तयारी गर्दैछिन् अस्मिता??
संगीत क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चाको बहस चल्न सुरु भएपछि अहिले उनी आर्को म्युजिक भिडियो “रामपियारी “बाट आफ्नो अभिनय लिएर हामी माझ आउने छिन । उक्त गीतमा नेपाली संगीत क्षेत्रमा चर्चामा रहनु भएका चक्र बम संग स्क्रिन सेयर गरेकीछिन् । आशा छ यो गीतलाई दर्शक स्रोताले निकै मन पराइदिनु हुनेछ । साथै उनको त्यो पस्तुती हेर्नको लागि उनका Fans पनि आतुर छन्। कसैको मनमा त्यस्तो छ कि यस गीतमा अस्मिताले कस्तो अभिनय लिएर आउनेछिन भनेर । आश गरौं उनको अभिनय दामदार हुनेछ ।
आशा छ , ऊनीले आफ्ना फ्यान्स ,सपोटर को मन जितेर नेपाली संगीत क्षेत्रमा निकै सफल हासिल गर्ने छिन । उनको त्यो कार्यमा मेरो ब्यक्तिगत(कपिल अधिकारी)तर्फबाट साथै सम्पुर्ण टीम(गोर्खाआवाज)को तर्फबाट उज्वल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दछु गर्दछौ ।